Ny Andro Nasionaly ao amin'ny Fanjakana Saudi Arabia vaovao dia hamirapiratra amin'ny tontolon'ny fizahan-tany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Arabia Saodita » Ny Andro Nasionaly ao amin'ny Fanjakana Saudi Arabia vaovao dia hamirapiratra amin'ny tontolon'ny fizahan-tany
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • fampiasam-bola • People • Vaovao Mafana Arabia Saodita • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • WTN
Ny Andriamatoa Andriamatoa Ahmed Aqeel AlKhateeb, minisitry ny fizahan-tany, dia tsy nandihy fotsiny niaraka tamin'i HE Edmund Bartlett, minisitry ny fizahan-tany Jamaika. Mandihy ny dihy eran-tany amin'ny fizahantany izy.
Mitady vonjy amin'i Riyadh izao tontolo izao, ary eo an-dàlana ny fanampiana.
Arabia Saodita dia nihanahery vaika nandritra ny areti-mandringana tamin'ny fomba maro.
Ny Fetim-pirenena anio dia mety ho Andron'ny fizahantany nasionaly ho an'i Saudi Arabia miaraka amn'izao tontolo izao mijery.
Ankalazaina hatrany ny Fetim-pirenen'i Saudi Arabia Septambra 23rd.
Fantatra eo an-toerana amin'ny anarana hoe Al-Yaom-ul-Watany, manamarika ny 23 septambra 1932 io, raha nanambara ny fanatambarana ny firenena ho fanjakana ny Mpanjaka Abdulaziz.
Ny fanjakan'i Saodiana Niorina tamin'ny 1932 i Arabia nataon'i King Abdulaziz (fantatra amin'ny hoe Ibn Saud andrefana).
Rehefa anontaniana ny olona amin'izao andro izao momba an'i Saudi Arabia, ny eritreritra momba ny fitsangantsanganana sy ny fizahantany dia mitovy amin'ny eritreritra momba ny solika sy ny harena.
Hafa mihitsy izany taloha, raha tsy nisokatra ho an'ny fizahan-tany ara-pivavahana na ara-barotra fotsiny ny fanjakana.
Avy amin'ny "tsy misy fizahan-tany", Saudi Arabia dia nanova ny "rehetra momba ny fizahan-tany" androany.
Tsy i Arabia Saodita no lasa mpilalao isam-paritra manan-danja indrindra amin'ny sehatry ny fizahan-tany fa, tsy isalasalana, fa iray amin'ireo mpilalao manerantany manandanja indrindra.
Ny fampiantranoana ireo birao isam-paritra toa ny UNWTO, WTTC, dia mandany an'arivony tapitrisa dolara ny firenena mba hanavotana ny sehatra misy azy ihany fa amin'ny fanampiana an'izao tontolo izao.
Ny vondrona mahaliana saodita avy amin'ny Tambajotra fizahan-tany manerantany eo ambany fitarihan'ny HRH Dr Abdulaziz Bin Naser Al Saud sy Raed Habbis dia tao amin'ny vondrona fifanakalozan-kevitra WhatsApp miasa mavitrika indrindra hita ankehitriny ao amin'ny WTN.
Arabia Saodita dia nanantena ny ho lasa trano vaovao ho an'ny World Tourism Organization (UNWTO). Ny fananana foibe foibe UNWTO ao amin'ilay Fanjakana dia hanasongadinana ny toerana manerantany ho mpitarika fizahan-tany manerantany ho an'i Saudi Arabia.
Rehefa a Prince Crown Saudi Arabia ary PM Espaniôla miresaka mety ho zava-dehibe amin'ny raharaham-barotra UNWTO ny mampijanona ny fanirian-daza ho an'ilay Fanjakana. UNWTO dia manana foibe any Espana, manome ny Fanjakan'i Espana toerana manerantany amin'ny fizahan-tany, ary toerana maharitra ao amin'ny UNWTO Executive Council.
Toa nisy ny fifampiraharahana momba ny fisorohana ny hetsiky ny Saudi Arabia hanomezana trano vaovao an'ny UNWTO izay mitohy ankehitriny.
Eoropeanina, amerika, na sinoa dia sahiran-tsaina amin'ny fiakarana any Arabia Saodita izay tsy nahombiazany matetika, saingy miteraka fanantenana any Afrika, Azia, na dia any Karaiba sy faritra hafa aza.
Ny Minisitry ny Fizahan-tany any Jamaika, Edmund Bartlett, dia faly tamin'ny Saudi Arabia, izany Ny Andriamatoa Atoa Ahmed Aqeel AlKhateeb, Arabia Saodita dia hita nandihy niaraka tamin'i Edmund Bartlett, Minisitry ny fizahan-tany Jamaika tao amin'ny tanin'i Bob Marley.
Andriamatoa Andriamatoa Ahmed Aqeel AlKhateeb, Arabia Saodita mandihy miaraka amin'i Edmund Bartlett, minisitry ny fizahan-tany Jamaika
Ny famaritana ny fizahantany manerantany dia miova miharihary fa mety hiova ho any Saudi Arabia.
Tsy nisy firenena hafa eto amin'izao tontolo izao naneho fahitana eran'izao tontolo izao ho an'ity sehatra ity taloha. Misy mihoatra noho ny fahitana, misy ny vola, be ny vola.
Rehefa mipoitra amin'ny fivoriana i Arabia Saodita, amin'ny fifanakalozan-kevitra dia io no ifantohan'ny fivoriana na fifanakalozan-kevitra.
Tamin'ny WTTC Sumit tany Cancun tamin'ny volana Mey ny fisehoan'ny Minisitry ny Saodiana dia nahatonga ny CEO WTTC Gloria Guevara nijanona tamin'ny asany tao amin'ny WTTC. Mpanolotsaina ambony ho an'ny minisitra izy izao AlKhateeb, mipetraka any Riyadh, ary mankalaza ny Fetim-pirenena Saodiana androany amin'ny maha olom-pirenena Meksikana azy.
Toa mandeha miaraka amin'ny sarin'ny firenena misokatra kokoa vonona ny hanangana ho avy mamiratra vaovao raha ny amin'ny famolahana ny sariny eo amin'ny tsena manerantany.
Ankehitriny ny Fanjakana dia mankalaza ny fetim-pirenena - ary azo antoka fa io koa dia fialantsasatra manan-danja lehibe amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany na aiza na aiza.
I Saudi Arabia dia nanambatra ireo faritra efatra ho fanjakana tokana tamin'ny alàlan'ny andiam-pandresena nanomboka tamin'ny 1902 tamin'ny fisamborana an'i Riyadh, tranon'ny razany, ny House of Saud.
Isan-taona, ny 23 septambra dia fotoana ahafahan'ny olom-pirenena Saodiana mankalaza ny lova ara-kolontsain'izy ireo ary mijery ny ho avy. Mandritra ny fetin'ny fetim-pirenena, tototry ny maintso sy fotsy ny arabe manerana ny firenena - ny lokon'ny sainam-pirenena Saodiana aseho amin'ny sary Doodle. Hita ho voaravaka amin'ireo loko an'ohatra ireo ny olom-pirenena ary mampiseho ny sainam-pirenena amin'ny fiara sy trano tsy miankina.
Trano misy ny toerana nahaterahan'ny Silamo ary eo am-panovana revolisiona ara-tsosialy sy ara-toekarena tanora izao, nankalaza ny faha-91 taonany ny Fanjakan'i Saudi Arabia Septambra 23. Ny teny filamatra ho an'ny Fetim-pirenena Saodiana amin'ity taona ity dia "A Home for Us".
Ankalazaina miaraka amin'ny dihy, hira ary fankalazana nentim-paharazana. Voaravaka amin'ny sainam-pirenena Saodiana ny arabe sy ny tranobe, ary ny olona miloko maintso ny fotsy sy ny fotsy ary mampiseho izany koa ny balaonina.
Arabia Saodita, izay fanjakan'ny Arabia Saodita, dia firenena any Azia Andrefana. Manitatra ny ankamaroan'ny Saikinosin'i Arabia, miaraka amin'ny velaran-tany manodidina ny 2,150,000 kmXNUMX. Arabia Saodita no firenena lehibe indrindra ao Moyen Orient, ary firenena faharoa lehibe indrindra amin'ny tontolo Arabo.
Ny fizahantany dia hita ho fahitana maoderina amin'ny fitomboana vaovao.
Nanambara ny minisiteran'ny fizahantany fa nanokatra varavarana ho an'ireo mpizahatany vahiny ny fanjakana ary manala ny fampiatoana ny fidirana ho an'ireo manana visa mpizahatany manomboka amin'ny 1 aogositra 2021
Ny Fanjakana dia mampiasa vola amin'ny fizahan-tany amin'ny lafiny lehibe. Ilay olona ao ambadiky ny vinan'ny fizahantany dia minisitra manana toe-tsaina eran'izao tontolo izao, Andriamatoa Ahmed Aqeel AlKhateeb.
Minisitry ny fizahantany any Arabia Saodita izy. Manana traikefa mihoatra ny 25 taona amin'ny sehatry ny fampiasam-bola sy ara-bola izy, nandritra izay fotoana nanorenany, nitantanany ary namerenany ireo masoivohon'ny governemanta sy orinasa maromaro. Fantatra amin'ny fahaizany mitarika fanovana eo amin'ny andrim-panjakana sy hahatratra fahitana amin'ny fomba mahomby sy mahomby.
Amin'izao fotoana izao dia mitazona ny toerana izy
Filohan'ny filankevi-pitantanan'ny fahefana fizahantany saodiana.
Filohan'ny filankevi-pitantanan'ny Tahiry fampandrosoana ny fizahantany.
Filohan'ny Komitin'ny programa momba ny kalitaon'ny fiainana
Ny filohan'ny filankevi-pitantanana ho an'ny fampandrosoana Saudi Arabia
Ny filohan'ny filankevi-pitantanan'ny indostria miaramila arabo saodiana (SAMI).
Sekretera jeneraly sy mpikambana ao amin'ny filankevi-pitantanana na fahefana amin'ny fampandrosoana ny vavahady Diriyah
Sekretera jeneraly ary filoha lefitry ny filankevi-pitantanan'ny New Jeddah Downtown
Mpikambana ao amin'ny filankevi-pitantanan'ny tahiry fampiasam-bola ho an'ny daholobe.
Mpikambana ao amin'ny filankevi-pitantanan'ny fikambanana ankapobeny ho an'ny indostrian'ny miaramila.
Mpikambana ao amin'ny filankevitry ny raharaha toekarena sy fampandrosoana.
Mpikambana ao amin'ny filankevi-pitantanan'ny orinasa Neom.
Mpikambana ao amin'ny filankevi-pitantanan'ny The Red Sea Development Company.
Mpikambana ao amin'ny filankevi-pitantanan'ny Tahiry ho an'ny fampandrosoana nasionaly.
Ny fampiasam-bola amin'ny sehatry ny fizahan-tany dia iray amin'ireo andry ao amin'ny Saudi Vision 2030 ary porofon'ny fikirizanana handroso hahatratra ny hetahetany sy ny tanjony:
Izany dia ahitana:
Ny fampiasam-bola amin'ny sehatra dia mandray anjara amin'ny famoronana tombony fampiasam-bola izay ahazoana tombony ho an'ireo mpampiasa vola eto an-toerana sy avy any ivelany.
Tsy heverinay ho mpamily ho an'ny fitomboana ara-toekarena fotsiny ny fizahantany, fa koa tetezana amin'ny fifandraisana ara-kolontsaina amin'izao tontolo izao, izay afaka manatsara ny haavon'ny fahatakarana sy ny fifanajana.
Ny fizahantany dia iray amin'ireo sehatra mitombo haingana indrindra eto an-tany. Nandritra izay valo taona lasa izay, ny sehatry ny fizahan-tany dia nanitatra salan'isa mihoatra ny salanisa manerantany.
Raha ny statistikan'ny World Travel and Tourism Council, ity sehatra ity dia mandray anjara amin'ny 10 isanjaton'ny vokatra anatiny (PIB).
Tamin'ny taon-dasa, ny tahan'ny fitomboan'ny mpizahatany dia 3.9 isan-jato raha nahatratra 3.2 isan-jato kosa ny toekarena manerantany.
Antenaina fa ny sehatry ny fizahan-tany dia hitombo 3.7 isan-jato amin'ny 2029, izay handray anjara amin'ny $ 13 miliara mahery amin'ny toekarena manerantany izay mitovy amin'ny 11.5 isan-jaton'ny harin-karena faobe global.
Ny sehatry ny fizahan-tany dia manohana asa 319 tapitrisa manerantany - izay manodidina ny iray amin'ireo asa 10 manerantany - ary tompon'andraikitra amin'ny famoronana asa iray isaky ny asa dimy izay nomena nandritra ny dimy taona lasa.
Amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ny sehatry ny fizahantany dia heverina ho feno indrindra amin'ny alàlan'ny fandraisana anjaran'ny ampahany lehibe indrindra amin'ny tanora sy ny vehivavy raha oharina amin'ny mpiasa manontolo.
Eo an-dàlam-pamolavolana ireo fotodrafitrasa sy serivisy lehibe eto amin'ny Fanjakana miaraka amin'ny tanjona hihaonana ny fitomboan'ny tinady amin'ny fomba mifanaraka amin'ny paikadin'ny fizahan-tany ao amin'ilay Fanjakana:
- Efitrano fandraisam-bahiny 150,000 70 no hatsangana mandritra ny telo taona ho avy. XNUMX isan-jaton'ireo hotely ireo no hampiharin'ny sehatra tsy miankina.
- Ny Fanjakana, amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpamatsy vola eo an-toerana sy avy any ivelany ary ny vola fampiasam-bola ao an-toerana, ao anatin'izany ny Tourist Development Fund, dia mikasa ny hanangana efitrano fandraisam-bahiny 500,000 manerana ny Fanjakana amin'ny 2030.
- Fahatsiarovana fahatsiarovan-tena marobe miaraka amin'ny sanda totalin'ny 115 miliara riyal Saodiana no vita sonia hanatsarana ny fotodrafitrasa sy hampitombo ny isan'ny efitrano fandraisam-bahiny misy.
- Ny Fanjakana dia mikendry ny hampitombo ny fahafaha-mitroka ny seranam-piaramanidin'ny Fanjakana maherin'ny 100 tapitrisa mpandeha isan-taona.
Zava-misy iainan'ny Arabia Saodita amin'izao fotoana izao:
Ny fihenan-karena ara-toekarena ateraky ny areti-mandringana dia nisy fiantraikany lehibe teo amin'ny sehatry ny fizahan-tany, indrindra ny sehatry ny seranam-piaramanidina sy hotely.
Ny fihenan'ny mpandeha 26 tapitrisa.
Misy asa 200,000 voakasik'izany sehatra izany.
Ny Fanjakana dia nanolotra fandraisana andraikitra hanohanana ny toe-karena amin'ny alàlan'ny 120 tapitrisa riyal Saudi.
Ny Saodiana ao amin'ity sehatra ity dia nahazo tombony tamin'ny fandraisana andraikitra hanohanana ny karaman'ny governemanta.
Nanangana hetsika hanohanana ny karaman'ny Saodiana amin'ny sehatra tsy miankina ny Fanjakana miaraka amin'ny sandan'ny vola 9 miliara riyal Saodiana. Ity fanohanana ity dia mikendry ihany koa ny sehatry ny fizahan-tany.
Nisy ny fotoana natolotra tamin'ny alàlan'ny programa Ajeer hanakalo tombony amin'ireo fotodrafitrasa hamerana ny fahasimbana.
Nihena ny sarany mifandraika amin'ny fizahan-tany sy ny tanàna.
Ny hotely dia nandray ny olom-pirenena maherin'ny 50,000 niverina tany amin'ny fanjakana tamin'ny alàlan'ny fandraisana andraikitra "ny fiverenan'ny olom-pirenena", izay nampiantranoina tamina efitrano fandraisam-bahiny maherin'ny 13,000 nandritra ny fe-potoana naharitra iray ka hatramin'ny roa herinandro.
Miaraka amin'ny tanjona handrisihana ny fizahan-tany eo an-toerana, ny Fanjakana dia nandefa ny vanim-potoanan'ny fahavaratra Saodiana izay mandrakotra ny toerana fizahan-tany 10 manerana ny firenena.
Ny paikadin'ny fizahan-tany ao amin'ilay Fanjakana
Nanaiky ny paikadim-pirenena ho an'ny fizahantany ny Fanjakana, izay nanasongadinana ireo làlana lehibe amin'ny hetahetan'ny sehatra mifanaraka amin'ny tanjon'ny Saudi Vision:
Tanjonay ny hampiakarana ny anjara birikin'ny sehatry ny fizahan-tany amin'ny harin-karena faobe avy amin'ny tahan'ny 3 isan-jato ankehitriny ka hatramin'ny 10 isan-jato amin'ny 2030.
Tanjon'ny sehatry ny fizahantany ny famoronana asa iray tapitrisa fanampiny hahatratrarana asa 1.6 tapitrisa amin'ny sehatry ny fizahantany amin'ny 2030.
Mikendry ny hisarihana fitsidihana 100 tapitrisa eo an-toerana sy iraisam-pirenena isan-taona amin'ny taona 2030 izahay.
Ny Visa mpizahatany
Ny Fanjakana dia nandefa ny visa fizahan-tany tamin'ny volana septambra 2019, izay ahafahan'ny olom-pirenen'ireo firenena 49 mahazo ny visa amin'ny alàlan'ny elektronika, raha toa kosa ireo manana visa amerikana, UK ary Schengen dia mahazo ny visa rehefa tonga, ary ny olom-pehezin'ny firenen-kafa dia afaka mangataka izany visa izany amin'ny alàlan'ny fitsidihana. solontenan'ny Fanjakana any amin'ny fireneny.
Ireo firenena 49 dia mitentina 80 isanjaton'ny fandaniana fizahan-tany manerantany ary mampiantrano manodidina ny 75 isan-jaton'ireo mitady fitsangantsanganana mahafinaritra eto amin'izao tontolo izao.
Ny Fud fampiasam-bola amin'ny fizahan-tany
• Inona avy ireo tanjona amin'ny fametrahana ny Tahirim-bola ho an'ny mpizahatany?
- Ny fametrahana ny Tahirim-bola ho an'ny fizahan-tany dia manentana amin'ny fampiroboroboana ny fampiasam-bola ataon'ny mpizahatany ao amin'ilay Fanjakana, amin'ny famoahana ny loharanom-bola, ny fampitomboana ny anjara birikin'ny sehatry ny fizahantany amin'ny harinkarena faobe, ary mamorona asa bebe kokoa ho an'ny lahy sy vavy Saodiana eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany, ary koa mandray anjara amin'ny fandraisana ireo mpizahatany marobe ao amin'ilay Fanjakana araka ny tanjon'ny paikadim-pirenena ho an'ny fizahantany sy ny Saudi Vision 2030.
• Inona avy ireo fitaovana hampiasaina amin'ny famatsiam-bola sy hisarihana ny fampiasam-bola ataon'ny mpizahatany?- Ny Tahirim-bola ho an'ny mpizahatany dia napetraka miaraka amin'ny renivola Saudi Arabia mitentina 15 miliara. Ny vola dia nanasonia ihany koa ny fahatsiarovan-tena amin'ny banky ao an-toerana mba hamatsy ara-bola ny tetikasan'ny fizahan-tany miaraka amina fara-fahakeliny 150 miliara riyal Saodiana.
Ny famatsiam-bola, amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo banky fampiasam-bola, dia nametraka vola hampiasa vola amin'ny sehatra fizahan-tany isan-karazany.
• Inona avy ireo vola azo araraotin'ny vola?
- Ny iray amin'ireo tanjona lehibe indrindra amin'ny famatsiam-bola dia ny manohana sy mandrisika ny fampiasam-bola ataon'ny mpizahatany ao amin'ilay Fanjakana.
Amin'io lafiny io, ny vola dia manokatra lafiny fiaraha-miasa amin'ireo mpampiasa vola mivantana amin'ny alàlan'ny fanomezana fanampiana azy ireo amin'ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny tetikasan'ny fizahan-tany izay mety hitarika amin'ny fampandrosoana ny sehatry ny fizahan-tany amin'ny faritra maro ao amin'ilay Fanjakana, ao anatin'izany ny sehatra isan-karazany, toy ny hotely, trano fisakafoanana ary ny fampandrosoana ny toeram-pizahantany, fandraisam-bahiny amin'ny ankapobeny ary mpikarakara dia.
Ity teti-bola ity dia mikendry ihany koa ny hahatonga ny tontolon'ny fampiasam-bola ho manintona kokoa ho an'ny sehatra tsy miankina ary hanolotra ny fanohanany handray tetika mahasoa kokoa, izay miteraka fotoana lehibe kokoa amin'ny fampiasam-bola amin'ny Fanjakana amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny toerana fizahan-tany amin'ny fomba mifanaraka amin'ny paikadim-pirenena ho an'ny fizahantany.
Ankoatr'izay, ny vola dia mandray anjara lehibe amin'ny fampiroboroboana ny indostrian'ny fizahantany amin'ny ankapobeny ary manentana bebe kokoa
Ny lahy sy ny vavy Saodiana hirotsaka amin'ity sehatra ity miaraka amin'ny tanjona hanomezana asa vaovao iray tapitrisa amin'ny 2030, ho fanampin'ny fampitomboana ny anjara birikin'ny sehatry ny fizahan-tany ao amin'ny Fanjakana ho 10 isan-jato amin'ny 2030 raha oharina amin'ny tahan'ny 3 isan-jato ankehitriny, ary mikasa ny hahazo fitsidihana mpizahatany 100 tapitrisa.
• Inona avy ireo vahaolana ara-bola atolotry ny famatsiam-bola?
- Ny vola dia manohana ny sehatra tsy miankina amin'ny alàlan'ny fanolorana findramam-bola, ary koa ny fampiasam-bola amin'ny tetikasa amin'ny alàlan'ny fananana anjara amin'ireto tetik'asa ireto. Ny vola dia manome antoka ihany koa amin'ny tetikasa sasany.
- Ny fanohanana dia atolotra amin'ny tranga sasany ho an'ny tetikasa misongadina sy mpisava lalana amin'ny alàlan'ny fanomezana ireo vahaolana rehetra voalaza etsy ambony. Ny vola, miaraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo masoivohom-panjakana mifandraika amin'izany, dia mandray anjara amin'ny fanomezana tany ho an'ny tetikasa lehibe sy manan-danja.
Tranonkala ho an'ny fampandrosoana ho an'ny fizahantany